प्रहरीको यस्तो हर्कत, रिहा भएलगत्तै फिल्मी शैलीमा पुनः गिरफ्तार गरेर ७ नेतालाई कहाँ पुर्याइयो ? — Sanchar Kendra
प्रहरीको यस्तो हर्कत, रिहा भएलगत्तै फिल्मी शैलीमा पुनः गिरफ्तार गरेर ७ नेतालाई कहाँ पुर्याइयो ?
धनकुटा । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका केन्द्रिय सदस्य तथा कोशी ब्यूरो इन्चार्ज किरण राई सहित ७ जनालाई प्रहरीले फिल्मी शैलीमा पुन: गिरफ्तार गरेको छ । बिहिबार रिहा भएलगत्तै बाहिर अलर्ट भएर बसेको प्रहरीले उनीहरुलाई पुनः गिरफ्तार गरेर उदयपुरतिर लागेको छ ।
गत चैत ५ गते धनकुटाको हिलेबाट गिरफ्तार गरिएका नेताहरुलाई धनकुटाको जिल्ला प्रशासनले समान्य धलौटिमा छोडेको थियो ।
तर, उदरपुरबाट गएको प्रहरी टोलीले पुनः गिरफ्तार गरेको हो ।
यसैबीच , गृहमन्त्रीको ठाडो निर्देशनमा प्रहरीले आफ्ना नेता कार्यकर्तालाई पुनः गिरफ्तार गरेको दलाल सरकारको चरित्र उदाङगो पारेको भन्दै नेकपाले उक्त घटनाको बिरोध गरेको छ । यो घटनाले प्रहरी प्रशासनको समेत गलत हर्कत प्रष्ट भएको नेकपाले जनाएको छ ।